Waxaan la shaqeyneynaa macmiil hadda leh ganacsi cusub, sumad cusub, domain cusub, iyo degel cusub oo ecommerce ah oo ku jira warshado tartan badan leh. Haddii aad fahamto sida macaamiisha iyo makiinadaha wax raadinta u shaqeeyaan, waxaad fahamsan tahay in tani aysan ahayn buur fudud oo la fuulo. Noocyada iyo goobaha leh taarikhda dheer ee maamulka ereyada muhiimka ah qaarkood waxay leeyihiin waqti aad uga sahlan ilaalinta iyo xitaa koraan darajadooda organic. Fahamka SEO ee 2022 Mid
Transistor: Ku marti geli oo u qaybi sawiradaada ganacsiga adoo isticmaalaya Platform Podcasting
Isniin, November 22, 2021 Isniin, November 22, 2021 Douglas Karr
Mid ka mid ah macaamiisheyda ayaa horey u qabtay shaqo cajiib ah isagoo ka faa'ideysanaya fiidyaha inta lagu guda jiro boggooda iyo YouTube-ka. Guushaas, waxay raadinayaan inay sameeyaan wakhti dheer, waraysiyo qotodheer oo dheeraad ah oo lala yeesho martida, macaamiisha, iyo gudaha si ay uga caawiyaan qeexida faa'iidooyinka alaabtooda. Podcasting waa bahal ka duwan marka ay timaaddo horumarinta istaraatiijiyadaada… iyo martigelinteeda sidoo kale waa mid gaar ah. Markaan horumarinayo istiraatiijiyadooda, waxaan bixinayaa dulmar guud oo ku saabsan: Maqalka – horumarka
Sida Qaadashada Habka Maskaxda leh ee AI ay u Jarayso Xogta Eexda
Sabtida, Oktoobar 23, 2021 Jimco, Oktoobar 22, 2021 Axmed Inam
Xalalka ku shaqeeya AI waxay u baahan yihiin xog-ururin si ay u noqdaan kuwo wax-ku-ool ah. Iyo abuurista xogahaas waxaa ka buuxa dhibaato eexeed oo aan toos ahayn oo heer nidaamsan ah. Dadka oo dhan waxay la ildaran yihiin eex (mid miyir qaba iyo mid miyir beelba). Eexdu waxay qaadan kartaa noocyo kasta: juqraafi, luqad, dhaqan-dhaqaale, galmood, iyo cunsuri. Iyo eexdaas nidaamsan ayaa lagu dubaa xogta, taas oo keeni karta alaabooyinka AI ee sii jira oo weyneeya eexda. Ururadu waxay u baahan yihiin hab miyir leh si loo yareeyo